Fonosana fantsika amin'ny fantsika amin'ny fantsika poloney
Fonosin'ny fantsika amin'ny fantsika amin'ny fantsika poloney
200packs / fomba tsirairay
Ny fonosana kitapo banga, 7strips / PC, 2PC / kitapo
MOQ: 200packs / fomba tsirairay
Shanghai Huizi Cosmetics Co., Ltd. dia famokarana matihanina izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famatsiana karazana sticker vita amin'ny fantsika. Ny orinasanay dia namokatra pirinty fantsika an-tapitrisany maro ho an'ny marika kosmetika fanta-daza erantany nanomboka tamin'ny 2010. Ny sticker vita amin'ny fantsom-boaloboka tsy manam-paharoa sy kanto dia misy amin'ny glitter, mangarahara, fluorescent ary 3D, sns.
1. Afafazo ny fantsika voajanahary amin'ny fako remover polish ary aorio ny cuticles.
2.Tambohy amin'ny fantsika izay mifanentana tsara indrindra ny fantsika.Tip: raha tsy azonao antoka ny momba ny roa
habeny, safidio ny kely na manapetaka ny lehibe kokoa ny habeny.
3.Mahatsiarova ilay sarimihetsika miaro mangarahara, atorio ny fantsika amin'ny fantsika ary apetraho eo afovoan'ilay fantsika. Mamelà toerana kely havia sy havanana eo am-baravaran'ny cuticle anao.
4. Soraty eo afovoan'ny fantsika ny fantsika ary avy eo ampiharo ny tsindry mafy amin'ny sisiny.
Ireo tsy mifady poizina tsy misy poizina malaza loko, ny fantsika vita amin'ny fantsika
Manamboatra fehikibo amin'ny famonosana ny fantsika amin'ny fantsika
Tsy misy poizina 100% tena fantsika mifono polish Nail hatsarana fantsika tsara tarehy
Famirapiratra volamena metaly mahery vaika nake vehivavy vatana milamina azo antoka azo tazomina ho an'ny tanana, lamosina
Drafitra fanamboarana varotra Nail Art fonosana Fashional Nail Decals sticker
Famolavolana fantsika amin'ny nail dia mamolavola fantsika marefo mametaka ny akora
Fividianana Shinoa tsara ny saribakolika amin'ny loko fantsika XnUMXd fantsika
Fambolena ambongadiny vidin-tsolika HUIZI taratasy fametaka gel
Loko fotsy fotsy 20 kofehy fametaka fantsika famonosana